Filtrer les éléments par date : jeudi, 22 juillet 2021
Androany alakamisy 22 jolay dia nampiantso mpanao gazety ny vovonana Isika rehetra miaraka amin'i Andry Rajoelina tao amin'ny foiben-toerany ARENA.
Ny Vovonana IRMAR, ivondronan’ireo Antoko sy Fikambanana manohana ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA, dia manambara fa :
- Manohitra tanteraka sy ankitsirano ny teti-dratsin’ny sasany hampiditra ny Firenena Malagasy ao anatin’ny korontana sy ny ady an-trano amin’ny alalan’ny fikasana hifofo ny ain’ny Filoham-pirenena Andry RAJOELINA, mba hisakanana ny fampandrosoana efa hirosoan’i Madagasikara ankehitriny.
- Manameloka amin’ny fomba rehetra ny fitetehan’olom-bitsy hametraka ny adilahy politika ho ambonin’ny tombontsoan’ny Malagasy manontolo mba ahafahan’izy ireo manao ampihimamba ny harem-pirenena.
- Mitsipaka amin’ny heriny rehetra ny fanandraman’ny sasany hanatanteraka fomba mamohehatra tsy mifanaraka amin’ny Demokrasia sy ny Soatoavina Malagasy hiarovana tombontsoa manokana.
Koa ny Vovonana IRMAR dia:
jeudi, 22 juillet 2021 17:48
Iavoloha : Fanaovan-tsonia famatsiam-bola 490 tapitrisa dolara avy amin'ny Banky Iraisam-pirenena
Tontosa ny alarobia 21 jolay 2021 tao amin'ny Lapam-panjakana Iavoloha ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa sy famatsiam-bola ireo tetikasa miisa efatra miaraka amin'ny Banky Iraisam-pirenena.
Mitentina 490 tapitrisa dolara izany famatsiam-bola izany, izay tafiditra ao anatin’ny teti-bola mitentina 1,1 miliara dolara natokan’ny vondron’ny Banky Iraisam-pirenena ho an’i Madagasikara amin’ity taona 2021 ity, izay voafaritra ao anatin’ny IDA19.
Nampatsiahivin’ny Filoha Andry Rajoelina fa raha nihaona tamin’ny Tale Jeneralin’ny Banky Iraisam-pirenena ny tenany, nandritra ny fihaonambe tao Abidjan farany teo, dia niombon-kevitra ny roa tonta fa ny firenena tsirairay no tsy maintsy mamaritra ny laharam-pahamehany sy mandroso ny paikadim-pampandrosoana entiny.
Etsy ankilany kosa, ireo mpamatsy vola dia mandroso soso-kevitra amin’ireo firenena ireo sy mampifanaraka ny famatsiam-bola entin’izy ireo hanatanterahana ireo paikady izay napetraka ireo.
Hifarana ny alatsinainy faha-26 jolay izao ny fandraisana ny anaran’ireo iantefan’ny antso mikasika ny fitsaràna miaramila amin’ity taona ity eny amin’ny oniversiten’Antananarivo.
Ny mpianatra, mpampianatra ary mpandraharaha, lahy sy vavy, teraka teo anelanelan’ny taona 1990 ka hatramin’ny 2002 (19 taona-31 taona) no voakasik’izany.
Hotontosaina ao amin’ny toby miaramila ao Betongolo ny alatsinainy 2 aogositra ka hatramin’ny alahady 29 aogositra, isan’andro manomboka amin’ny 7 ora maraina ka hatramin’ny 4 ora tolak’andro, ny fitsaràna miaramila.
Ilain’ny olompirenena rehetra, indrindra ireo mpianatra manam-pikasana ny hanohy fianarana any ivelany, ny mandalo fitsaràna miaramila.
Ho an’ny zatovolahy manokana dia anisan’ireo taratasy takiana amin’ny fanamboarana ny pasipaoro ny karatra manamarina ny fahavitan’ny fitsaràna miaramila.
Merci à Mademoiselle ANDRIAMAHENINA Ranjamino Irvanah, à l'Université Catholique de Madagascar UCM, représentée par :
- Le Dr. RANDRIANASOLO Jean de Dieu, Chef de département, Examinateur ;
- Monsieur HERINIAINA Harijaona Thierry Christian, Sociologue-Anthropologue-Juriste Publiciste, Rapporteur,
Pour la présentation du Projet Gestion des flottes automobiles en entreprise Et en transport urbain, en vue de l'Obtention du diplôme de Licence, mention Economie - Gestion, parcours Management et Administration d'Entreprise, et la création prochaine de la Société ARI GPS.
- La société SLMI, dirigée par Monsieur ANDRIANTSARAHARIFARA Radonavalona, en étroite collaboration avec COTISSE transport, Coopératives ONJA ligne 192, Mirindra 163 et la ligne 194 à Antananarivo et bien d'autres clients,
- La société Vitatsika Consulting, avec Patrick RAHARIMANANA et ses associés.